Tel Aviv kpọrọ obodo ọhụrụ kachasị ọnụ n'ụwa ibi na ya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Israel Na -agbasa Akụkọ » Tel Aviv kpọrọ obodo ọhụrụ kachasị ọnụ n'ụwa ibi na ya
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • culinary • omenala • Entertainment • Akụkọ Ejiji • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Israel Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Onye ndu afọ gara aga – Paris – gbadara na nke abụọ, Singapore sochiri ya. N'ime obodo ndị ọzọ dị n'elu 10 kachasị ọnụ bụ, n'usoro, Zurich, Hong Kong, New York, Geneva, Copenhagen, Los Angeles, na Osaka.
Ngalaba ọgụgụ isi nke Economist (EIU) weputara ọnụ ahịa obibi ndụ nke ọnwa Disemba 2021 n'ụwa niile ụnyaahụ, na obodo ọhụrụ kachasị ọnụ n'ụwa, dịka EIU siri kwuo, bụ ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ.
Nnyocha EIU tụlere ọnụ ahịa obibi n'ofe obodo 173 zuru ụwa ọnụ wee tụnyere ọnụ ahịa ihe karịrị ngwaahịa na ọrụ 200 kwa ụbọchị.
Ndi Israel Tel Aviv Echibela okpueze dị ka obodo kachasị ọnụ n'ụwa ibi na ya, na-awụlikwa elu n'elu ndepụta, site na ọnọdụ ise n'afọ gara aga, na nke mbụ ya.
Dị ka EIU, Tel Aviv rịgoro n'ọkwa n'ihi ịrị elu nke ego Israel, shekel, "na-ebuli elu megide dollar [US] site n'iwepụta ọgwụ mgbochi COVID-19 na-aga nke ọma nke Israel," nke bụ otu n'ime ngwa ngwa n'ụwa.
Shekel nke Israel gbagoro 4% megide dollar US kwa afọ n'isi mbido ọnwa gara aga, nke mere ka ọnụ ahịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ iri nke ngwa ahịa mụbaa. Ọnụ ego nri na ụgbọ njem kacha emetụta.
Onye ndu afọ gara aga – Paris – gbadara na nke abụọ, Singapore sochiri ya. N'ime obodo ndị ọzọ dị n'elu 10 kachasị ọnụ bụ, n'usoro, Zurich, Hong Kong, New York, Geneva, Copenhagen, Los Angeles, na Osaka. Rome dara nke kachasị na ọkwa, n'etiti mbelata ọnụahịa maka nri na uwe.
Obodo kachasị na-eto ngwa ngwa bụ isi obodo Iran, Tehran, nke wulitere ebe 50 ruo 29, n'agbanyeghị ụkọ na mmụba ọnụahịa n'ihi mmachi US. Damaskọs, Syria bụ obodo kachasị ọnụ ahịa na nyocha ahụ.
N'ozuzu, na EIU Nnyocha na-egosi na mkpọmkpọ ọkọnọ, mgbanwe nke ọchịchọ ndị ahịa, na mgbanwe mgbanwe ego n'ime afọ gara aga amụbawo ọnụ ahịa obibi n'ọtụtụ obodo ukwu n'ụwa, ndị nyocha na-atụkwa anya na ọnụ ahịa ga-arị elu n'afọ na-abịa. Edekọbara mmụba kachasị ukwuu na njem njem, yana ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala kwa lita gbagoro 21%.
Ọzọkwa, dị ka ọnụ ọgụgụ EIU si kwuo, ọnụego mmụba nke ọnụ ahịa ọ nyochara ugbu a bụ nke kacha edekọ n'ime afọ ise gara aga, na-esi na 1.9% na 2020 ruo 3.5% kwa afọ dịka nke Septemba 2021.